Nitombo isa ny mpampianatra nahavita fiofanana
Namoaka mpiofana sokajy roa samy hafa ny CRINFP
Sokajy mpianatra miisa roa no navoakan’ny CRINFP na Centre de Regional L`Institut National de Formation Pedagogique ao amin’ny Augagneur Toamasina, ny zoma 25 jolay 2014. Fampiofanana ho mpampianatra sy mpanolotsainam-pampianarana no atao ao amin’ny CRINFP. Ny voalohany mpampianatra niofana ireo dia nitondra anarana hoe SAHY ary ny faha roa kosa dia nitondra anarana SEDRA izay mpanolotsain’ny mpampianatra.
Ny mpampianatra andiany SAHY dia niofana nandrintran’ny iray taona, ary ho an’ ireo mpampianatra izay niofana mahakasika ho mpanolotsainam-pampianarana kosa dia telo latsaka kely teo ny faharetan’ny fiofanana, ary efa afaka mandray ny asany avy hatrany ireo mpampianatra nahavita ny fiofanana ireo, araka ny nambaran’ny lehiben’ny CRINFP no sady mpampiofana, Rtoa ZAFITODY Ravolafeno Sylvie.
Tonga nanome ny voninahitra ny lanonana ny mpitondra fanjakana eto an-toerana, nahitana ny solombavam-bahoaka izay voafidy teto Toamasina Atoa FAMINDRA Justin sy ny olom-panjakana maro, nifandimby nikabary ary samy nampahery ireo mpampianatra nahavita fiofanana.
Nisongadina ihany koa tamin’ny kabary nifandimbiasana, ny paik’ady vaovao ho entina hanatsarana ny fomba fiasa eo anivony fampianarana izay ataon’ny minisiteran’ny fampianarana amin’izao.
Nisy ihany koa ny fanolorana ny mari-pankasitrahana sy mari-pahatsiarovana ho an’ ireo mpampianatra niofana izay nahazo naoty tsara nandritra ny fiofanana, ary nifaranana tamin`ny fiarahana-misakafo tao amin`ny restaurant le Bateau Ivre ny lanonana.
(65) Anderson RAVO : 26-07-2014 - 08:30